Utero-Vaginal Prolapse (UVP) – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သားအိမျကတြယျဆိုတာ ဘာလဲ သငျကွာဖူးပွီးပီလား?
ဆီးကနျြသလိုဖွဈတာ၊ မှေးလမျးကွောငျးမှာ တဈဆို့ဆို့ဖွဈနတောမြိုးဆို ” ညညျး သားအိမျကနြပွေီ ထငျတယျ ” ဆိုတာမြိုး….
ပုံမှနျသဘာဝအားဖွငျ့ သားအိမျကို မှေးလမျးကွောငျးကွှကျသားမြှငျတှကေ တငျပဆုံကှငျးထဲ နရောတကဖြွဈအောငျ ပံ့ပိုးပေးထားပါတယျ။
ဒီပံ့ပိုးထားတဲ့ မှေးလမျးကွောငျးကွှကျသားတှေ အားနညျးလာတဲ့အခါ သားအိမျဟာ မှေးလမျးကွောငျးထဲ ကြှံကလြာပွီး သားအိမျကတြယျဆိုပွီး ဖွဈပါတယျ။
အရှယျမရှေးဖွဈတတျပမေယျ့ သှေးဆုံးပွီး ဟျောမုနျးနညျးခြိနျမှာ ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။
၃) ညှပျဆှဲ၊ လစေုပျပွီး ခကျခဲစှာမှေးထားရသူ
၆) ကာလတာရှညျ ခြောငျးဆိုးသူ
၇)အလေးအပငျ မ ရသူမြား
ကြှံထှကျလာသော သားအိမျအသားပို နံရံတှငျ အနာဖွဈခွငျး၊ မှေးလမျးကွောငျးထဲ သို့ သားအိမျပွနျသှငျးမရခွငျး တို့ထိဖွဈတတျပါသညျ။
ပွငျးထနျမှုပျေါမူတညျ၍ သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျ လမျးညှနျခကျြဖွငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျ၍ကုသခွငျး
သားအိမျတှငျး နရောကစြရေနျ( ကှငျး) ထညျ့၍ ကုသခွငျး ၊ ခှဲစိတျပွုပွငျကုသခွငျးတို့ လုပျနိုငျပါသညျ။
သားအိမ်ကျတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သင်ကြာဖူးပြီးပီလား?
ဆီးကျန်သလိုဖြစ်တာ၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှာ တစ်ဆို့ဆို့ဖြစ်နေတာမျိုးဆို ” ညည်း သားအိမ်ကျနေပြီ ထင်တယ် ” ဆိုတာမျိုး….
ပုံမှန်သဘာဝအားဖြင့် သားအိမ်ကို မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားမျှင်တွေက တင်ပဆုံကွင်းထဲ နေရာတကျဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
ဒီပံ့ပိုးထားတဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေ အားနည်းလာတဲ့အခါ သားအိမ်ဟာ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ကျွံကျလာပြီး သားအိမ်ကျတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်မရွေးဖြစ်တတ်ပေမယ့် သွေးဆုံးပြီး ဟော်မုန်းနည်းချိန်မှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
၃) ညှပ်ဆွဲ၊ လေစုပ်ပြီး ခက်ခဲစွာမွေးထားရသူ
၆) ကာလတာရှည် ချောင်းဆိုးသူ
၇)အလေးအပင် မ ရသူများ
မွေးလမ်းကြောင်းမှ အသားပိုကဲ့သို့ ထွက်လာခြင်း
ကျွံထွက်လာသော သားအိမ်အသားပို နံရံတွင် အနာဖြစ်ခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ သို့ သားအိမ်ပြန်သွင်းမရခြင်း တို့ထိဖြစ်တတ်ပါသည်။
ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်၍ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန် လမ်းညွန်ချက်ဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်၍ကုသခြင်း
သားအိမ်တွင်း နေရာကျစေရန်( ကွင်း) ထည့်၍ ကုသခြင်း ၊ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကုသခြင်းတို့ လုပ်နိုင်ပါသည်။